Culture Archives - Page2of6- INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE | INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
Fête de la Francophonie 2018 Yangon
MATIN မနက်ပိုင်း Morning — 10h à 14h | Le Petit Marché | Grand Jardin Gastronomie, artisanat, bouquiniste, associations, maquillage pour enfants မနက် ၁၀း၀၀ မှ နေ့လယ် ၂း၀၀ | ဈေးတန်းငယ် | ဥယျာဉ်ဝင်း စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များ ခင်းကျင်းရောင်းချခြင်းများနှင့် ကလေးများအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းများ။ 10am to 2pm | Le Petit Marché | Big garden Food, handicraft, associations, bookshop, make up for kids. — 9h30 à 12h | Atelier Cuisine | Salle de lecture Atelier de cuisine par des chefs de l’école Hotelière de Lauzanne et restaurant Shwe Sa Bwe မနက် ၉း၃၀ မှ နေ့လယ် ၁၂း၀၀ | အချက်အပြုတ်အလုပ် | Lecture ခန်းမ Lauzanne ဟိုတယ်သင်တန်းကျောင်းနှင့် ရွှေစားပွဲစားသောက်ဆိုင်တို့၏ စားဖိုမှူးကြီးများ ဦးဆောင်မည့် အချက်အပြုတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ 9.30 am to 12pm | Cooking workshop | Lecture room Cooking workshops by chefs from the Hospitality school of Lauzanne and Shwe Sa Bwe Restaurant — 10h à 12h | L’Heure du Conte | Mediathèque Découvrez des histoires fabuleuses pour tout public မနက် ၁၀း၀၀ မှ နေ့လယ် ၁၂း၀၀ | ပုံပြောချိန် | စာကြည့်တိုက် မိသားစုများအတွက် ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ် ပုံပြင်ပြောချိန်။ 10am to 12pm | The Hour of Tales | Mediatheque Discover fantastic stories for the whole family! === === === TOUTE LA JOURNEE တစ်နေ့တာပတ်လုံး All day — TOURNOI DE PETANQUE Participez au jeu préféré des français! ရိုးရာပေတွန်းရိုက်ပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်လူမျိုးတို့နှစ်သက်သည့် ဘောလုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲ၌ ပါဝင်ကစားနိုင်ခြင်း။ Petanque Tournement Participate in the favourite game of the French! — Déambulation et jeux littéraires လမ်းလျှောက်တင်ဆက်မှုများနှင့် စာပေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ Stroll and literary games === === === APRES-MIDI နေ့လယ် Afternoon — 13h | Dictée d’Or La Grande Compétition est de retour. Participez à l’une des catégories et gagnez l’un des nombreux prix! Sur inscriptions. နေ့လယ် ၁း၀၀ | ရွှေရောင်စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြိုင်ပွဲ နာမည်ကျော်သတ်ပုံပြိုင်ပွဲကြီး၏ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဆုများရယူနိုင်ခွင့်။ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းသူများသာ။ 1 pm | The Golden Dictation The famous competition is back! Participate to one of the categories and getachance to win one of our many prizes! Upon registration — 14h – 15h | Activités Activités, escape game et lecture de poésie présentés par l’école française Joseph Kessel နေ့လယ် ၂း၀၀ မှ ၃း၀၀ | အစီအစဉ်များ Joseph Kessel ပြင်သစ်ကျောင်းမှ တင်ဆက်သွားမည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရသည့်ဂိမ်းများနှင့် ကဗျာရွတ်ခြင်း။2pm –3pm | Activities Activities, escape game and poetry reading presented by Joseph Kessel French School. — 15h – 16h | Danse Démonstration et initiation au tango et à la danse Hip Hop နေ့လယ် ၃း၀၀ မှ ၄း၀၀ | အက ပရိတ်သတ်နှင့်အတူ တန်ဂိုအကနှင့် ဟစ်ဟောပ့်အက သရုပ်ဖော်ကပြမှု။3pm –4pm | Dance Initiation classes to Tango and Hip Hop Dance — 17h00 | Concours de la chanson | Petite scène Venez découvrir les talents du concours de la chanson 2018! ညနေ ၅း၁၅ | သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ | စင်မြင့်ငယ် ၂၀၁၈ ပြင်သစ်သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ဂီတစွမ်းရည်များ။ 5:00 pm | Singing contest | Small stage Come discover the talents of the 2018 singing contest! === === === SOIR ညနေခင်းနှင့် ညခင်း Evening — Concert | Grande scène | 19h30 – 23h ည ၇း၃၀ မှ...
Concert Karpatt French Music band
Sunday 4th February, 6PM YMCA Mandalay – Corner of 26th and 75th street On the occasion of Fête de la Francophonie at the Institut Français de Birmanie on 10 February the French band KARPATT will play for the first time in Mandalay, Myanmar. From French variety to gypsy jazz, rock or South African rhythms, discover the emotional and borderless universe of Karpatt. Karpatt are from Paris and play on the emotion, the cheerfulness and the thoughtlessness. FOLLOW US Facebook : Karpatt Youttube : www.youtube.com/user/Karpattofficiel Instagram : www.instagram.com/karpattmusic/ Twitter...